FRONTLINE FOR BISADAHA: QIIMAHA, NOOCYADA DAROOGADA, IYO SIDOO KALE AMARKA DALABKA EE TUSAALE AH SPOT HE IYO COMBO - GURI, GURI
Nasiib darro xayawaankaaga, laakiin raali-gelinta dulin! Frontline for bisadaha: qiimaha iyo tilmaamaha isticmaalka
Waxyaabaha ay ka mid tahay dulin-dhiig-ku-nuugidda duurjoogta, ugu waxtarka badan oo ammaan ah waa dhibco.
Diyaargarowyadani waa sahlan tahay in la isticmaalo, waxaa lagu dabaqayaa aagga xayawaanka xayawaanka ah waxayna ka kooban yihiin sunta cayayaanka oo ciribtiraya dhibaatada la xiriirta muuqaalka cayayaanka dhiigga ku dhaca.
Dhibaatooyinka casriga casriga ah ee gebi ahaanba waa kuwo aan wax khasaare ah u lahayn caafimaadkooda xitaa carruurta yar yar. Laakiin isticmaalkooda waxay u baahan yihiin nidaamka codsiga habboon.
Mid kasta oo ka mid ah daawooyinka ayaa leh faa'iido iyo faa'iido daro. Mid ka mid ah daroogooyinka casriga ugu caansan ee maanta loogu talagalay dulinka dhiigga nuugista ayaa la tixgeliyaa Khadka hore.
Kharashka hal dhalo oo ah 100 ml oo Ruush ah ayaa lagu qiyaasay celcelis ahaan 600 oo rna iyo in ka badan. Waxaad ka iibsan kartaa waxoogaa ka jaban dukaamada internetka.
"FrontlineNexgard"- kiniin macquul ah oo bilaash ah bishiiba;
"Muuqaalka Frontline on"- dareeraha isticmaalka dibadda;
Xalka laysku qurxiyo "Buufinta hore"waxaa laga heli karaa dhalooyinka caaga ah ee ku shaqeeya madaxa buufinta;
Xalka dareeraha ee "Jaantuska hore".
Cayayaanka, oo lagu soo saaray foomka dareeraha, ayaa loo isticmaalaa in laga saaro boodada ma aha oo kaliya in bisadaha, laakiin sidoo kale eeyaha.
Maaddooyinka firfircooni waa la tixgeliyaa fiproniltaas oo ku jirta cayayaankaas curyaanka ugu xoogan, inkasta oo xayawaanku aysan ahayn mid halis ah: gaar ahaan, marka la buufin aan la dhex gelin dhiigga, waa walxo sun ahSidaa darteed, waxaad u isticmaali kartaa iyada oo aan wax xannibaad ah lahayn.
Pet way liqi kartaa wadar ahaan 300-600 mg oo xal ah halkii kiilo oo culeyskeeda ah. Kama cabsan kartid in xayawaanku matago, xasaasiyad ama cawaaqibyada kale ee xun ee sumowga: Dhibaatooyinka kale marka la adeegsanayo xalku waa mid dhif ah.
Daadi - Qaab kale oo Frontline loo sii daayo. Waxay xakameyn karaan madaxa madaxa xayawaanka. Tani way ka duwan tahay shaambada iyo dhibcaha kantaroolka.
Caymisku wuxuu leeyahay astaamo gaar ah oo ka soocaya daawooyinka kale ee la midka ah. Laakiin, marka laga reebo faa'iidada, waxaa sidoo kale jira faa'iido daro in mulkiilaha xayawaanka ah uu sidoo kale u baahan yahay inuu ogaado.
suurtogalnimada in lagu shaqeeyo ma aha oo kaliya qalajinta, laakiin sidoo kale madaxyada xayawaanka;
fududaynta shaqada. Iibinta foomka dhameystiran.
Ka dib markii lagu buufinayo falal wax ku ool ah todobaadkii oo dhan.. Xalalka kale waxay haysan karaan hantidooda laba bilood.
Qaali qaali ah. Marka la barbardhigo dhibcaha iyo shaambada, cayayaankaan waxaa lagu qiyaasay kala badh ilaa laba jeer ka qaalisan.
Duuf ku buufin dusha sare ee jirka., kudhac dhalada ilaa 10-15 cm Markaad codsanaysid buufin, ha ilaawin inaad toosiso dhogorta, ka dibna qaybo ka mid ah miisaaniyadu waxay hoos u dhigi doonaan maqaarka. Haddii dhibcahyadu ay si gaar ah u degaan dhogor, saameynta codsiga xalka uma noqon doono mid aad u xoog badan.
Madaxa xayawaanka si taxadar leh ayaa loo daaweeyaa.. Walaxa waa inuusan geli karin afka afka iyo gaar ahaan, indhaha.
Ka dib marka la buufiyo, xayawaanka waxaa lagula talinayaa in wax la qaado.sidaas darteed saacad badhkeed, ugu yaraan, bisad ma lick laftiisa. Inta lagu jiro wakhtigan, fipronil wuxuu bilaabi doonaa in uu sameeyo.
Ka dib markii la cayimay, xayawaanka waa in lagu soo furtaa biyo socda.. Waxaad isticmaali kartaa shaambo joogto ah oo aad ku dhaqdo.
Baaritaan lagu sameeyo, daawada si dhammaystiran ayey u buuxisaa hawsha. Sida ficilku muujiyo, boodada waxay u dhintaan habka hore. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo xayawaanka ka weyn laba bilood. Intaa waxaa dheer, qalabkani wuxuu daaweeyaa isbeddelka dhegta. Haddii tirada naqaska ay hoos u dhacdo, laakiin maahan wax badan, hababka lagu soo celin karo toddobaad kaddib marka ugu horeysa.
Dareen u yeelo! Halista khatarta hore ee xayawaanku waa sida ugu hooseeysa ee suurtogalka ah, hase yeeshe, qofku wuxuu u baahan yahay inuu iska ilaaliyo in uu isaga ilaaliyo. Markaad shaqeyneyso, waxaa fiican inaad xirato gacmo gashi gacmahaaga ah.
Daroogada ayaa waxoogaa badali karta midabka jaakadda ee meelaha la isticmaalo. Sidaa darteed, haddii xayawaanku si joogto ah uga qaybqaato bandhigyada, waxa fiican inaad doorato daroogo kale.
Noocaan daroogada ayaa wanaagsan maxaa yeelay waxay awood u leedahay in laga saaro cayayaanka qaangaarka ah isla markaana isla markaasna ka hortagaya dhalmada cayayaanka cusub. Sidaa daraadeed, xayawaankuna si fiican ayuu u ilaaliyaa infekshanka labaad.
boodada iyo dulinyada kale ee jidhka xayawaanka ayaa ku dhiman doona maalin gudaheed;
Hal isticmaalka lacagta ayaa damaanad qaadaya ilaalinta bisha soo socota;
daroogadu waa amaan xubnaha xubnaha nooc kasta;
sheyga wuxuu u adkeysan karaa qoyaan wuxuuna shaqeyn doonaa xataa haddii aad xirtid xayawaankaaga ka dib shaambeyn.
Marka la dalbado, daroogadu waxay ku faaftaa dusha sare ee jidhka, xoogsaarida qanjidhada xayawaanka iyo dhaqdhaqaaqa muddada fog ee meelaha xarumaha horumarinta wakiilada qoyska qoyskoodu ku yaalaan.
Daawadani waxay u egtahay xalka cad oo leh ur aan caadi aheyn. Si fudud u dhig, Comline Combo - Dhibco joogto ah. Waxaa lagu iibiyaa dhuunta polyetylen, sida caadiga ah, Miisaanka 0.5 ml. Marka la isticmaalo, caarada tuubada ayaa jabisa.
Jebiyaan weelka dhuumaha.
Kala xaji xayawaanka xayawaanka ku dhow xiniinyaha oo ku dabool dhibcaha u dhexeeya garabka garabka..
Tuuji dhuunta adag si aad u hesho daawada si buuxda..
Waxaa lagu dabaqi karaa oo kaliya hal mid, laakiin sidoo kale dhowr dhibcood.
Waa muhiim! Ha u oggolaanin bisad inay cabaan dhibic! Ficil ahaan, tani waxay keeni kartaa sumeyn, ka dib markaa xayawaanku waa inuu ku dhaqaa caloosha. Qalabka waa in aan loo isticmaalin bisadaha ama bisadaha, iyo sidoo kale kittens, haddii aysan ku noqonin laba bilood.
Barta xuddunta ah
Waxa kale oo ku jira fipronil. In muuqaalka iyo qaabka - dareere aan lahayn midab casaan ah ee codsiga dhibic.
Waxaa lagu iibiyaa baakad ku jirta 0.5 ml pipet ah oo leh balaastiig leh oo si fudud u jebiya.
Si firfircoon ayaa loo isticmaalaa si looga takhaluso dulin-dhiigga nuugista., iyo sidoo kale daaweynaya isnadaamiska dhegta.
Maqaarka maqaarka u dhexeeya garabka garabka..
Suufku wuu kala baxaa, xalka wuxuu ka yimaadaa meelo badan..
Daawada ka soo horjeeda boodada ansax ah hal bil iyo badh bilood. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo bisadaha uurka leh ama nuujinaya. Laba maalmood kaddib markaad dalbato cayayaanka, xayawaanka waa in lagu maydiyaa shaambo.
Haddii maqaarkiisu yahay mid culus, waxyeellada daawadu maaha mid laga reebay: tusaale ahaan, fal-celin xasaasiyadeed. Kadib isticmaalka walaxda waa la joojinayaa, halkaana waa la dhaqaa suufka.
Digniin! Dhibcaha Frontline, isagu kuma talin karo inuu isticmaalo daaweynta carruurta yar yar ee ka yar laba bilood.
Markaad isticmaalayso walaxda sida loogu talagalay gacmo-gashi ayaa lagu talinayaa. Tani waxay si gaar ah u dhacdaa haddii ay jiraan cillado ama dildilaacyo maqaarka ah.
Waa in aanad karin oo kicin bacda, gaar ahaan si loogu oggolaado carruurta yaryar ilaa hal maalin ka dib isticmaalka walaxda.
Marka dareeruhu galo maqaarka gacmahooda, waa lagama maarmaan isla markiiba biyo raaci. Daaweynta ka dib, gacmaha waa in si fiican loo dhaqo biyo diirran.
Front Line ayaa si isdaba-mar ah u xaqiijiyay waxtarkeeda waxaana si firfircoon loogu isticmaalaa ujeedada ay sameeyaan dadka jecel caanaha. Laakiin markii la codsanayo, waa in aan la iloobin in xoolaha xayawaan kasta uu yahay shakhsi, sidaa daraadeed ma noqon doonto mid aad u macquul ah in lala tashado dhakhtarka xoolaha ka hor intaan la qabsan xayawaankaaga.
Gebogebo, waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyoow fiidiyoow ah oo ka hadlaya Calaamadaha Hore: